Barcelona Oo Camp Nou Ku Garaacday Kooxdii Hogaamineysay La Liga una soo gudubtay booska 5 aad
Home Horyaalka Spain Barcelona Oo Camp Nou Ku Garaacday Kooxdii Hogaamineysay La Liga una soo...
Barcelona ayaa gaartay guushii labaad ee isku xigta ee horyaalka La Liga iyadoo 2-1 kaga badiyay caawa kooxda Real Sociedad oo marti ku aheyd garoonka Camp Nou.
Kooxda Catalans ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay kooxdii hogaamineysay La Liga iyadoo Real Sociedad uu hogaanka u dhiibay Willian Jose laakiin goolal ay kala dhaliyeen Jordi Alba iyo Frenkie de Jong ayay Barcelona ku badisay.
Real Sociedad ayaa u soo dhacday kaalinta labaad inkastoo ay isku dhibco yihiin kooxda hogaanka heysa ee Atletico Madrid oo ay wadaagaan 26 dhibcood halka Barcelona ay soo gashay kaalinta 5aad iyagoo leh 20 dhibcood laakiin waxay ciyaareen labo kulan ka yar inta ay dheeshay Real Sociedad.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 2-1 oo ay Barcelona ku garaacday kooxda Real Sociedad.
Barcelona ayaa lugta xigta martigalindoonta Kooxda Valencia 19 bishan December.
Previous articleJuventus oo lagu qabtay bar-bardhicii 6-aad xili ciyaareedkan
Next articleLiverpool oo guuldaro dhabarka u saarisay Tottenham, Roberto Firmino oo ka caawiyay